ch 19 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 19 လုကာ
19:1 ထိုအထဲသို့ ဝင်. ပြီးမှ, သူသည်ယေရိခေါမှတဆင့်လမ်းလျှောက်.
19:2 ထိုအခါ, ဇက်ခဲအမညျရှိသောသူတယောကျရှိ၏. သူသည်ထိုအခှနျခံခေါင်းဆောင်ခဲ့, သူကချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့.
19:3 ထိုမင်းသည်ယေရှုကိုမြင်ခြင်းငှါရှာကြံ, သူသူကိုမြင်ရဖို့. ဒါပေမယ့်သူကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူအစုအဝေး၏, သူအရပ်ထဲမှာငယ်အဘို့အ.
19:4 နှင့်ရှေ့ဆက် running, သူတစ်ဦးသဖန်းပင်၏အသီးကိုတက်, သူ့ကိုကြည့်ရှုအံ့သောငှါဤမျှ. သူသည်အနီးအပါးရှိသသွားခဲ့သည်.
19:5 သူသည်ထိုအရာအရပျမှာရောက်ရှိလာသည်ပြီးမှ, ယရှေုကထကြည့်ပြီးသူ့ကိုမြင်, သူကသူ့ကိုအားဆို၏: "ဇက်ခဲ, မြန်မြန်ဆင်း. ဒီနေ့အတွက်, ငါသည်သင်တို့၏အိမျတျော၌အိပ်သင့်ပါတယ်။ "
19:6 ထိုအပွေးသှားတာ, သူဆင်း လာ., သူကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သူ့ကိုလက်ခံ.
19:7 ထိုသူတို့ကဤအမှုအလုံးစုံကိုမြင်သောအခါ, သူတို့ပွစျတငျကွ, သူတစ်ဦးအပွစျရှိလူတဘက်သို့လှည့်ခဲ့သည်ဟုဆို.
19:8 သို့သော်ဇက်ခဲ, နေဆဲရပ်နေ, သခင်ဘုရားကလည်း,: "အကယ်, သခင်ဘုရားသည်, ငါသည်ဆင်းရဲသားတို့အားပေးကြှနျုပျ၏ဥစ်စာတစျခုထက်ဝက်. ထိုအခါငါမဆိုအမှု၌မည်သူမဆိုလိမ်လည်လှည့်ပြီဆိုပါက, ငါလေးဆသူ့ကိုပြန်ဆပ်မည်။ "
19:9 ယရှေုကလညျး: "ဒီနေ့, ကယျတငျတျောမူခွငျးဤအိမျတျောထံသို့လာခဲ့ပြီ; ဒီအတွက်ကြောင့်, သူလည်းအာဗြဟံ၏သားဖြစ်၏.
19:10 လူသားသည်ကိုရှာရန်နှင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့သောအရာကိုကယ်ဖို့လာပါပြီ။ "
19:11 As they were listening to these things, အပေါ်ဆက်လက်, he spokeaparable, because he was nearing Jerusalem, and because they guessed that the kingdom of God might be manifested without delay.
19:12 ထို့ကြောင့်, ဟုသူကပြောသည်: “A certain man of nobility traveled toafar away region, to receive for himselfakingdom, and to return.
19:13 And calling his ten servants, he gave them ten pounds, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: ‘Do business until I return.’
19:14 But his citizens hated him. And so they sentadelegation after him, ဟုဆို, ‘We do not want this one to reign over us.’
19:16 Now the first approached, ဟုဆို: 'သခင်, your one pound has earned ten pounds.’
19:17 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်: 'ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်, good servant. Since you have been faithful inasmall matter, you will hold authority over ten cities.’
19:18 And the second came, ဟုဆို: 'သခင်, your one pound has earned five pounds.’
19:19 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, ‘And so, you shall be over five cities.’
19:20 And another approached, ဟုဆို: 'သခင်, behold your one pound, which I kept stored inacloth.
19:22 သူကသူ့ကိုအားဆို၏: ‘By your own mouth, do I judge you, O wicked servant. You knew that I am an austere man, taking up what I did not lay down, and reaping what I did not sow.
19:23 ဆိုတော့, why did you not give my money to the bank, သောကြောင့်, upon my return, I might have withdrawn it with interest?''
19:25 ထိုသူတို့သညျအထံတျောကပြောပါတယ်, 'သခင်, he has ten pounds.’
19:26 သို့ဖြစ်., ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, that to all who have, it shall be given, and he will have in abundance. And from him who does not have, even what he has will be taken from him.
19:28 ဤအမူအရာကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, သူရှေ့ဆက်သွားလေ၏, ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်.
19:29 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, when he had drawn near to Bethphage and Bethania, to the mount which is called Olivet, he sent two of his disciples,
19:30 ဟုဆို: “Go into the town which is opposite you. Upon entering it, you will find the colt ofadonkey, tied, on which no man has ever sat. Untie it, and lead it here.
19:33 ထိုအခါ, as they were untying the colt, its owners said to them, “Why are you untying the colt?"
19:36 ထိုအခါ, as he was traveling, they were laying down their garments along the way.
19:38 ဟုဆို: “Blessed is the king who has arrived in the name of the Lord! Peace in heaven and glory on high!"
19:39 And certain Pharisees within the crowd said to him, "အရှင်ဘုရား, rebuke your disciples.”
19:40 ထိုသူတို့အားဆို၏, "မင်းကိုပြောမယ်, that if these will keep silent, the stones themselves will cry out.”
19:41 ထိုမင်းသည်ချဉ်း ကပ်. လာသောအခါ, တမြို့လုံးကိုမြင်လျှင်, သူကငိုကြွေး, ဟုဆို:
19:42 "သင်လူသိများခဲ့သာလိုလျှင်, အကယ်စင်စစ်ပင်ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက်, ထိုအရာများကိုသင်၏ချမ်းသာဖြစ်ကြ၏. ယခုမူကားသူတို့သည်သင်၏မျက်စိကွယ်ပျောက်လျက်ရှိ.
19:43 ထိုနေ့ရက်ကာလအဘို့သင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လာမည်လိမ့်မည်. ထိုအသင်တို့၏ရန်သူများမှာချိုင့်နှင့်တကွသင်ဝိုငျးလိမ့်မည်. ထိုသူတို့ကသင်ဝန်းရံအရပ်ရပ်အပေါ်သင်၌ထိနျးခြုပျလိမ့်မည်.
19:44 ထိုသူတို့ကမြေပြင်ကိုဆင်းဖို့သင်ခေါက်ပါလိမ့်မယ်, သင်၌နေသောသူသည်သင်၏သားတို့နှငျ့အတူ. ထိုသူတို့သညျသငျသညျအတှငျးရှိကျောက်တခုပေါ်မှာစွန့်ခွာမည်မဟုတ်, သင်သည်သင်၏စစ်ကြောသောအခါနှိမ့၏အချိန်ကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ အကြောင်းမူကား, "
19:45 ထိုအခါဗိမာန်တော်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း, သူကမှာရောင်းချတဲ့သူတွေထဲကထုတ်ပစ်စတင်, ကိုဝယ်ယူတဲ့သူနဲ့အဲဒီ,
19:46 သူတို့ကိုဟု: "ဒါဟာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား: '' ငါ့အိမ်ကို။ ဆုတောင်းပဌနာ၏အိမ်တော်ဖြစ်၏ '' သို့သော်သင်သည်ဓားပြတစ်တွင်းထဲသို့တော်မူပြီ။ "
19:47 ထိုမင်းသည်နေ့တိုင်းအစဉ်အတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေး. ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များ, နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့, နှင့်လူမျိုး၏ခေါင်းဆောင်များကသူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရှာကြံခဲ့ကြ.
19:48 ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်ရမှန်းမတှေ့. လူများအပေါင်းတို့သည်ဂရုတစိုကျသူ့ကိုနားထောင်ရင်းကြ၏.